ဥပါဒါန်ကြောင့် ဥပါဒ်ရောက်ကြရသူများ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဥပါဒါန်ကြောင့် ဥပါဒ်ရောက်ကြရသူများ
Posted by meengelay on Jul 6, 2011 in Copy/Paste | 12 comments
From , http://www.ywarookyaung.blogspot.com
မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ ပြောပြခြင်းများ အား ပြန်လည် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
တပ်မတော်ကလည်း သူတို့မကယ်ရင် တိုင်းပြည်ချောက်ထဲကျသွားမယ်တဲ့။ အဲဒါကြတော့ရော..
ဟုတ်ပါတယ်။ အရမ်းသံယောဇဉ်ရှိပြီးရင် အပေါင်းအသင်းတွေ ခင်မင်မှုတွေ ပျက်ယွင်းမှာတို့ ခွဲခွာရမှာတို့ကို အရမ်းကြောက်ရွံ့ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်တက်လမ်းအတွက် မခွဲခွာချင်ပဲ ခွဲခွာခဲ့ရတာတွေ၊ နောက်ဆုံးတော့ ရှင်ခွဲမခွဲတောင် သေခွဲခွဲရတာ လူ့သဘာဝရဲ့ ဓမ္မတာပါပဲ။ ဒါတွေကို နားလည်ထားမယ်ဆိုရင် နေရတာ ဘယ်နေရာရောက်ရောက် အဆင်ပြေမယ်ထင်ရပါတယ်။ ကိုယ်ခင်မင်ရတဲ့သူတွေနဲ့ ခွဲခွာခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ ရင်ထဲမှာဟာတာတာနဲ့ အရမ်း ကြေကွဲခဲ့ရပါတယ်။
နိဒါန်းနဲ့ နိဂုံးကတော့ ဥပါဒါန်အကြောင်းတွေဖြစ်နေတယ်
ထိုခန္ဓာ ဒုက္ခရောက်ပုံ ကိုရေးလိုက်မယ်ဆိုရင်
မိဘ၊ကိုယ်ခင်မင်ရတဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်း တွေနဲ့ခွဲရတဲ့အခါ ရင်ထဲမှာ တကယ်ခံစားရတယ် တကယ်ဝမ်းနည်းရတယ်နော် သူမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဆိုတာ တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုပဲလိုတာပါ ဥပါဒါန်ကြောင့် ဥပါဒ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံနိုင်ရင်တော့ ကိုယ်သက်သာမယ် ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ ခံပေရော့ပဲ
ဘုရားရှင် ဟောထားခဲ့တဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်းကို ရင်ထဲအမြဲ ထည့်ထားရမယ် ….
“ငါ ဧ။် ချစ်ခင်အပ် ၊ မြတ်နိုးအပ်သော အရာအားလုံးတို့နှင့် ရှင်ကွဲ ကွဲရခြင်း ၊ သေကွဲ ကွဲရခြင်း ဖြစ်ချေမည်”
တချိန်မှာတော့ အကုန်လုံးကို ခွဲခွာသွားကြရမှာပါပဲလေ ….
ရှင်ကွဲကွင်လျှင်တောင် တနည်းနည်းနဲ့ပြန်ဆုံ နိုင်သေးတာမို့ သေကွဲကွဲရတာ ဓမ္မတာဆိုပေမဲ့ ကြောက်တယ်… ။ အသက်ရှင်နေတဲ့ အချိန်လေးကို ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ကုန်ဆုံးချင်လို့ ကိုယ်အနှစ်ကြိုက်ဆုံး ၊အပျော်ဆုံးအလုပ်ဖြစ်တဲ့ အိပ်စက်အနားယူခြင်းတွေ လုပ်တာတောင် …. နားခါးအောင် လာလာပြောနေကြသေးတယ်… အိပ်ပုတ်ကြီးတယ်တဲ့
အလုပ်အတွက်ဆိုရင်တော့… ငကန်းသေရင် ငစွေပေါ်လိမ့်မယ်တဲ့….
မရှိလည်းဖြစ်တာပဲ ကမ္ဘာကြီးပျက်သွားတာမှ မဟုတ်တာ။
ဖြစ်သင့်သလောက် ဖြစ်တာလား ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်တာလား တော့ ရှိသေးတာပေါ့လေ။
တပ်မတော်ကတော့ တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲကျမှာ စိုးလို့ လိုက်ဆွဲရင်း သူကပါ ဆွဲချသွားတာပါ။
ဒီလိုကိစ္စတွေက တစ်နေ့ဖြစ်မယ်ဆိုတာ သိသိကြိးပဲလေ
စိတ်ထဲကရှိတဲ့ အတိုင်းဆို အဲဒီဖြစ်မြဲဓမ္မတာဆိုတာကြီး
တစ်နေ့ရောက်လာမှာကို ကြောက်တာ ဒါပေမဲ့
တစ်နေ့နေ့မှာတော့ လူတိုင်း မလွဲမသွေကြုံလာရမှာပါပဲလေ ….
ကွဲ တာ မကွဲတာ တော့ မသိဘူး.. မခွဲချင်ပေမဲ့ ကံတရားက ခွဲ ထားလို့ မကွဲပဲ အခွဲ ခံထားတာတွေ တပုံကြီး သြလို့..
ဒီခေါင်းစဉ်လေး ကို ကြိုက်တယ်